China Professional Mugadziri Wemakero Akasiyana E Ceramic Flat Burrs vagadziri uye vanotengesa | Trimill
Flat burr: Inosanganisira maviri akapamhama burr, imwe burr inoramba yakamira, uye imwe yacho inoitisa kutenderera nekukuya. Inogaya bhinzi kofi mumagirigisi nekucheka, saka chimiro chayo chiri kunyanya muchimiro chemaflakes. Chimiro ndechekuti iyo yepamusoro neyezasi burrs yakaiswa muparutivi, uye bhinzi kofi inosundidzirwa mukati yekukuya nesimba rinotenderera rezasi burr. Naizvozvo, huremu hwembesa dzekofi dziri pamusoro hunokanganisa kuenzana kwembesa dzekofi mumabhureki. Nekuda kwekukanganiswa kweiyo bhinzi kofi, huwandu hwehupfu hwakatsetseka hunowedzerwawo. Nekudaro, iyo flat burr iri muchimiro cheshiti uye nzvimbo yemadziro maseru yakakura, saka iyo kofi yekumanikidza uye kuburitsa kunogona kuwedzerwa munguva pfupi. Chiyero uye kunhuwirira kunowedzera munguva pfupi. Nekuda kweiyo diki saizi yemaflat maflakes, zvinonetsa kutora kwenguva yakareba kuti iwedzere mvura yakawandisa kuti ibudise zvakasiyana-siyana uye zvinonakidza. Inokodzera kuItaly kukuya uye ruoko-chibhakera kukuya.
Iyo flat burr yakakamurwa kuita zvinhu zviviri: ceramic uye simbi isina simbi. Ceramic flat burr ine zvakanakira kukwirira kuomarara, mutengo wakaderera, hapana hwema hwekunhu, uye kuwacha mvura.
Kambani yedu inonyanya kugadzira kugadzirwa kwe ceramic flat burrs kwemakore makumi maviri, isu tine ruzivo rwakajeka mukugadzirwa kwechigadzirwa, zino chimiro dhizaini uye kugadzikana kugadzirisa, izvi zvinhu ndizvo zvinhu zvikuru zvinokanganisa kugona kwekukuya hupfu uye kupera uye kufanana kweupfu .
Pashure: Iyo yeClassic Stainless Simbi Inogadziriswa Manual Kofi Grinder
Zvadaro: Yakagadziriswa Stainless Simbi Girazi Bhodhoro Munyu Pepper Shakers